T.O.E | Dr Chit Nge (Philosophy) Ph.D, London
Tag Archives: T.O.E
Approaching Nirvana (6)
Posted on April 16, 2015 by chitnge
Approaching Nirvana (6) Scientists are trying to have “T.O.E”. T.O.E means T stands for Theory, O stands for Of and E stands for Everything. So, T.O.E stands for Theory of Everything. However, they cannot construct it very well. Sometime, they … Continue reading →
Posted in Buddhism	| Tagged Buddhism and Science, causality, craving, English Posts, Nibbana, Science, T.O.E, နိဗ္ဗာန်, ကြိုတင်ပြော ဟောကိန်းထုတ်မှု	| Leaveacomment
သိပ္ပံပညာထက် သာလွန်မြင့်မြတ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာအဆုံးအမ
Posted on August 8, 2012 by chitnge
သိပ္ပံပညာထက် သာလွန်မြင့်မြတ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာအဆုံးအမ ယေဓမ္မာ ဟေတုပ္ပဘ၀ါ – အကြင်ဖြစ်ရပ်တိုင်း၌ အကြောင်းခံတရားရှိသည် … ဤအဆုံးအမသည် ဗုဒ္ဓဘာသာ၌ ထင်ရှားသည်။ ကမ္ဘာသည် ဤကဲ့သို့သော ဥပဒေသကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း နံပါတ်ကုန် မတွေ့သေးချေ။ ၄င်းတို့သည် T.O.E ခေါ် (Theory of everything) ကို ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။ အိုင်းစတိုင်း လက်ထက်ကလည်း မတွေ့ခဲ့ချေ။ အိုင်းစတိုင်းသည် T.O.E ရှာချိန်မှာ ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်မှ မသေချာမှုနိယာမ (Uncertainty Principle) ပေါ်လာသဖြင့် စိတ်ဓာတ်ကျသွားသည်။ သေတပန် … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, T.O.E, သိပ္ပံ	| 1 Comment
Posted on June 7, 2012 by chitnge
Science and Beyond Manyatimes I have explained about scientific knowledge. There are some conditions of scientific knowledge such as Systematization, Causality, Predictability, Objectivity, Verifiability, and Universalization. These are good conditions for scientific knowledge with the result scientific … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, English Posts, T.O.E, Vipassana	| Leaveacomment
ခက်ခဲနက်နဲပါသည်ဟု ဆိုအပ်သော သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ နိဒါန်းပိုင်း အခန်းကဏ္ဍ
Posted on April 13, 2012 by chitnge
ခက်ခဲနက်နဲပါသည်ဟု ဆိုအပ်သော သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ နိဒါန်းပိုင်း အခန်းကဏ္ဍ စာရေးသူသည် မကြာခဏ သိပ္ပံအကြောင်း ရေးနေသည်။ အချို့သော အကြောင်းအရာများမှာမူ သာမန်အားဖြင့် ခက်ခဲနက်နဲနိုင်သည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ခက်ခဲနက်နဲသော သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာ အခန်းကဏ္ဍ၏ နိဒါန်းပိုင်းများကို အခြေပျိုး၍ တင်ပြလိုသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် အများသူငါ​ သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း လူတော်များဖြစ်ကြသည်။ အိုင်းစတိုင်း ဆိုလျှင်မူ တိကျသေချာမှုကို အမြတ်တနိုး တန်ဖိုးထားသည်။ မသေချာခြင်းကို လက်မခံလိုချေ။ ထို့ကြောင့် မသေချာခြင်းဆိုင်ရာ သိပ္ပံနိယာမ သဘာဝကိုပင် ငြင်းဆန်ခဲ့လေသည်။ ဤနေရာ၌ သိပ္ပံပညာရပ်၏ မသေချာခြင်းနိယာမနှင့် … Continue reading →
Posted in Buddhism & Science	| Tagged Buddhism and Science, Myanmar Posts, T.O.E, ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်, လူ့အသိပညာ၏ အထွတ်အထိပ်, သိပ္ပံ, အိုင်းစတိုင်း, ဟော့ကင်း	| Leaveacomment
Total Visitors : 7365
Today Visitors : 55